०७८ असोज ०२ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशि अनुसारकाे भाग्यफल! हेर्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > राशिफल > ०७८ असोज ०२ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशि अनुसारकाे भाग्यफल! हेर्नुहाेस्
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असोज ०२ गते शनिबार इश्वी सन २०२१ सेप्टेम्बर १७ तारीख, भाद्र शुक्लपक्ष धनिष्ठा , २८:१९ बजे उप्रान्त शतभिषा, तिथि: त्रयोदशी २९;४९ बजेदेखि द्वादशी , ६:५७ बजे उप्रान्त पूर्णिमा, करण: वालव ६:५७ बजेदेखि कौलव , १८:२० बजे उप्रान्त भद्रा, योग: सुकर्मा , २०:२५ बजे उप्रान्त धृति (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
बिहानै राम्रो खवर सुन्न पाइने छ । यसले मनमा सामान्य उमंग प्राप्त हुने दिन रहेकोछ । मान्यजनको स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्नहुन सक्नेछ । मध्यान्ह पश्चात भने अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आम्दानि मध्यम रहला । बौद्धिक क्षेत्रका ब्यक्तित्व सँगको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला ।
मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्य सम्पादित रहनेछन् । यात्राकारक समय रहेकोछ । अरुद्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । मध्यान पश्चात मानसम्मानमा आधात पर्नसक्ने सम्भाबना रहेकोछ । पारिवारिक स्वास्थमा समस्या उत्पन्न हुनसक्नेछ । नोकरीमा उन्नति मिल्नेछ ।
कार्य सम्पादन प्रति अरुको दबावको महसुस हुनाले दिन त ना ब पूर्ण ब्यतित रहला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ । पारीवारिक भेटघाटको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । ब्यापार ब्यवसायमा आफ्नो प्रभुत्व रहनेछ ।
आय आर्जनका बिभिन्न श्रोत साधनहरु फेला परेतापनि मानसिक चन्चलताले कार्य श्रेत्रमा ब्यवधान आई पर्नेछ । अध्ययन अध्यानपनमा अधिक समय ब्यतित गर्नु पर्नेछ । आँट शाहसमा कमि आउनाले कार्यसम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । सहयोगी ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले मनमा आघात पुग्नेछ ।
शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्नहुन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । मानसीक चन्चलताले कार्य क्षेत्रमा झन्झट आई पर्नेछ । सामान्य बादबिवादको सामना गर्नु पर्ला । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ ।
अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ । स्वास्थका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना समेत रहेकोछ । तपाईको कार्य बाट फाईदा लिनेहरुको सङख्यामा बृद्धि हुनेछ । आट शाहसको बृद्धि हुने योग रहेको छ ।
०७८ साल जेष्ठ ०८ गते शनिबार, हेर्नुहाेस् तपाईहरूको राशि अनुसारकाे भाग्यफल यस्तो छ !